Nosakanan’i Shina ny fampitan-kafatra Telegram fa ‘nanampy ny mpisolovavan’ny mpandala ny zon’olombelona’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2015 18:31 GMT
Hita ho nanatevin-daharana ireo mpanao raharahan'aterineto sakanan'i Shina ny Telegram. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Nosakanana ao Shina noho ny fiampangana ho manampy ny Shinoa mpisolovavan'ny zon'olombelona amin'ny raharaha fanaony andavanandro sy amin'ny fandaminana ataon'izy ireo ny fampihatram-pandefasan-kafatra Telegram. Nanaraka ny fanafihana an-tserasera goavana ireo lohamilin'ny [na siniben-tserasera] orinasa ao Azia Pasifika tamin'ny fiandohan'ity volana ity izany fanakanana izany.
Ny Gazety tsy miankina ao Hong Kong no nitatitra ny fanakanana voalohany tamin'ny 13 jolay. Araka ny blockedinchina.net dia nosakanan'ny siniben-tserasera ao Beijing, Shenzhen, anatin'i Mongolia, Heilongjiang ary faritanin'i Yunnan ny endrika an-tseraseran'ny Telegram ao Shina.
Pikantsary avy amin'ny blockedinchina.net tamin'ny 20 jolay, nampiseho ny sehatra an'aterineto Telegram voasakana ao Shina.
Tamin'ny 12 jolay ny gazety tantanin'ny fanjakana Isan'Androm-Bahoaka namoaka lahatsoratra iray miampanga ny Telegram ho manampy ny mpisolovava sy ny mpitondratenin'ny mpandala ny zon'olombelona, izay lazaina ho mampiasa ny fampihatra sy ny zoro “Karajia Miafina” (izay mamela ny hafatra ho voafafa ho azy ao anatin'ny fotoana voafaritra mialoha) ahafahana “mamely ny antoko [Komonista] sy ny governemanta.” Ireny fiampangana ireny no nivoaka farany indrindra tamin'ireo andiam-pamelezana natao tamin'ny mpitondratenin'ny mpandala ny zon'olombelona ao Shina, izay efa nisy olona 23 tao amin-dry zareo efa nosamborina, ary mihoatra ny 100 hafa miaritra tsindry avy amin'ny fanjakana. Misy ihany koa mpisolovavan'ny mpandala ny zon'olombelona, tahaka an'i Pu Zhiqiang, efa niatrika fangejana noho ny hafatra nalefan-dry zareo tao amin'ny famahanam-bilaogy bitika shinoa Weibo.
Ny Telegram izay velomin'ny fikambanana iray tsy mitady tombombarotra, miorina ao Berlin, dia naorin'ilay Rosiana mpanangana orinasa eo amin'ny sehatry ny aterineto, Pavel Durov, izay mpanagana ihany koa ny tambajotra sosialy lehibe indrindra ao Rosia, VK (izay matetika mahazo anaram-bositra “Facebook-n'i Rosia”). Taorian'ny tsindry avy amin'i Kremlin hizara rakitra momba ireo mpikarakara ny vondrona Euromaidan ao amin'ny vondrom-piarahamonina VK sy hanakatona ireo vondrona rosiana miady amin'ny kolikoly, ankoatra ny hafa, dia namidin'i Durov ny anjaran-drenivolany ao amin'ny VK, voatery izy hiala amin'ny fitarihana ny orinasa, ary nandao an'i Rosia hitady fanomboham-piainana vaovao.
Tamin'ny 10 jolay, nilaza ny fisian'ny fahafihana amin'ny alalan'ny DDos (distributed denial of service) goavana nahazo ny siniben-tseraserany ao Azia-Pasifika ny Telegram. Tao amin'ny Twitter no nilazain'i Pavel, mpanorina, izany fanafihana an-tserasera izany.
Fanafihana DDoS amin'ireo foiben-tahirin-kevitra rehetra an'i Telegram. Misy olona tsy faly.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy iray ao amin'ny habaka ofisialy, notombanan'ny Telegram ho mety avy amin'ny Koreana mpifaninana aminy, kakao Talk sy Line, izay nifindra tambabe hankany amin'ny Telegram tamin'ny 2014 noho ny sivana tany, no niavian'ny daroka ankisesy tamin'ny voalohany.
Ankehitriny fantatray fa voarindra avy ao Azia Atsinanana ny daroka ankisesy.
Tsikaritray ny fitomboana avo telo heny teo amin'ny fisoratana anarana avy ao Korea Atsimo tao anatin'ny roa herinandro farany. Ny fotoana farany nahazoanay daroka ankisesy DDoS mavesatra dia tamin'ny faramparan'ny Septambra 2014, tamin'ny fotoana nivoahan'ny fanafintohinana momba ny fiainan'olona manokana ao Korea Atsimo ka betsaka ireo nisoratra anarana avy amin'io firenena io.
Renay ihany koa fa misy orinasa sasantsasany tsy faly amin'ny sehatra vaovao anananay ahafahan'ny artista hamorona sitckers araka izay endrika tiany maimaimpoana ho an'ireo mpiserasera. Roa herinandro taorian'ny famoahana izany dia tratran'ny daroka ankisesy DDoS maivamaivana tokoa izahay, izay nikendrena manokana ihany koa ireo olona mpifanakaiky avy ao Azia Pasifika.
Raha misy ny tsahotsaho an-tserasera fa mety ho tompon'andraikitra amin'ny daroka ankisesy DDoS ihany koa ny governemanta shinoa, dia tsy namoaka filazana ofisialy momba izay niavian'ny fanafihana ny Telegram, saingy nilaza fa avy any Azia Atsimo-Atsinanana ny fanafihana.
@xoclate @telegram We're on it 24 hours a day. Managed to be online for 95% of users. The attack is coming and is coordinated from SE Asia.
@xoclate @telegram mijery tsy tapaka azy ity ao anatin'ny 24 ora isan'andro izahay. Miezaka ny ho an-tserasera ho an'ny 95%-n'ny mpiserasera. Tonga ny fanafihana ary voarindra avy any Azia Atsimo-Atsinanana.
Rehefa nanontaniana momba ny tatitra fisian'ny fanakanana avy ao Shina i Durov dia niteny tamin'ny TechCrunch fa tsy mieritreritra izy hoe “voasakana tanteraka ao Shina” ny Telegram saingy niteny kosa fa nihena ny fifamoivoizan-tserasera avy amin'io faritra io. “[Saingy] raha voasakana tanteraka ao Shina izahay, dia tsy hilalao fanenjika amin'ny governemantany amin'izao ambaratonga izao. Avelao ry zareo hanakana,” hoy ny voatatitra fa nolazain'i Durov.
Mieritreritra ny famoretana mahazo ny karazana fampihatram-pifanakalozan-dresaka tahaka ny Telegram ihany koa i Durov, ilay teratany avy any Rosia. Tamin'ity volana jolay ity , Ivan Tavrin, filohan'ny MegaFon, orinasam-pifandraisandavitra fahatelo lehibe indrindra ao Rosia, nangataka tamin'ny governemanta rosiana hihevitra ny hampidirana lalàna vaovao amin'ny servisy fampitan-kafatra WhatsApp, Viber ary Skype. Ankoatra ny mahampifaninana mivantana ireo fampihatra ireo amin'ny SMS mahazatra fanomen'ny orinasam-pifandraisandavitra, dia noraisin'i Tavrin teo amin'ny sehatry ny fiarovana apetrak'ireo fifanakalozan-kevitra ny raharaha, tamin'ny filazany fa manome fahefana mampidi-doza ho eo ampelatanan'ny mpampihorohoro sy ny mpandoto ridrina an-tserasera izy ireny.